बाटो नबनाएको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्षको सडकमै स्थानीयले कठालो समातेपछि..
शनिबार, भाद्र १२ २०७८
काठमाडौं । एम्बुलेन्सको लागि फोन गर्दा जनतालाई ढाटेको भन्दै स्थानीयहरुले एक गाउँपालिका अध्यक्षलाई कालर (कठालो) समातेका छन् ।
बागमति प्रदेश अन्तर्गतको दोलखा जिल्लास्थित रहेको मेलुँग गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठलाई सोही ठाउँका नागरिकहरुले कठालो समातेर हातपात गरेका छन् । मेलुँग गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मुकुनेस्थित एक गम्भिर विरामीलाई बोक्न एम्बुलेन्सको लागि बाटो नभएको भन्दै कठालो समातेको हो ।
स्थानीय जनक बहादुर तामाँगलाई उपचारको लागि काठमान्डौँ लैजान गाउँपालिकामा बाटो नभएको अवस्थामा उनलाई फोन गरिएको थियो । बाटोमा एम्बुलेन्स गाडी फँसेर जनक बहादुरलाई त्यहाँबाट बोकेर लैजान गाह्रो भएको भन्दै बाटोमा पहिलो सफा गरिदिन फोन गरिएको थियो ।
स्थानीयले फोन गर्दा गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले उनीहरुलाई आफू चरिकोट रहेको भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले फोनमै आफू बाटो सफा गर्न लगाउँछु आश्वासन दिएका थिए । फोनमा आश्वासन पाएपछि विरामीलाई स्ट्रेचरमा लिएर अगाडी बढेका स्थानीयहरुले तीन वटा स्ट्रेचर भाँचिएको थियो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई बिरामी लिन आएको गाडी बाटोमा पहिरो हिलोमा फसेको जानकारी गराउँदै डोजरले बाटो सफा गरिदिन आग्रह गरिएको थियो । त्यसपछि अध्यक्षले “म चरिकोट छु, मैले बाटो सफा गर्न भनिदिन्छु” भनेर भनेका थिए ।
तर, केही बेरपछि बिरामी बोक्नेहरु जोरधारा पुग्दा नरबहादुर श्रेष्ठ तेहि देखेपछि झुक्याएको र बाटो समेत सफा नगरिदिदा स्थानीयहरु आक्रोसित बनेका थिए । सोही समय उनको कठालो समातेर हातपात गरेको बुझिएको छ ।
यता, गाउँपालिका अध्यक्षलाई आक्रोसित स्थानीयहरुले कठालो मात्र समातेको तथा हातपात नगरिएको बताइएको छ । केही दिन अघि छिमेकी मुलुक भारतमा एक जनप्रतीनीधिलाई बिजुलीको पोलमा बाँधेर हातपात गरेको भिडियो र तस्विर भाइरल बनेको थियो ।
अमेरिकालाई चीनको चेतावनी-हामीलाई कमजोर नआँक
चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरे अमेरिकाले रक्षा गर्नेछः जो बाइडेन
चीन-भारतबिच सीमा विवाद, युद्धको स्थिति, तनावमा नरेन्द्र मोदी !
भुटानले सीमा वार्ता अघि बढाउने सम्झौता गरेपछि नरेन्द मोदी तनावमा !
तौल घटेपछि किम जोङ उन तनावमा !